Kulan Lagu Qiimaynayay Biyo Galinta Magaalada Jijgjiga - Cakaara News
Kulan Lagu Qiimaynayay Biyo Galinta Magaalada Jijgjiga
Jigjiga(CN) khamiis 14ka January, 2016, Kulan balaadhan oo lagu qiimaynayay heerka biyo galinta maamulka magaalada jigjiga ayaa ka dhacay hoolka shirarka ee xafiiska maamulka magaalada jigjiga.
kulankaasi oo ay hogaaminayeen wasiirka xafiiska khayraadka biyaha DDSI marwo Fartuun Cabdi Mahdi, iyo maayirka maamulka magaalada jigjiga mudane Axmed Maxamuud Axmed. Ayaa waxaa ka soo qaybgalay shaqaalaha iyo masuuliyiinta maamulka magaalada, masuuliyiinta xaafadaha kala duwan ee maamulka magaalada jigjiga iyo qaybaha kala duwan ee bulshada xafadaha magaalada jijiga.
Waxaana ugu horayntii kulankaasi ka hadashay wasiirka xafiiska khayraadka biyaha DDSI marwo fartuun Cabdi Mahdi oo sharax dheer ka bixisay guulaha laga soo hooyay sanadihii ugu danbeysay dhinaca biyo galinta maamulka magaalada jigjiga, waxayna sheegtay in kulankan lagu cabirayo heerka waxqabadka wakaalada biyaha ee maamulka magaalada jigjiga 6dii bilood ee ugu danbaysay.
Dhankiisa maayirka maamulka magaalada jigjiga mudane Axmed Maxamuud Axmed oo furitaankii kulankaasi ka hadlayay ayaa ka warbixiyay dadaalada balaadhan ee ay xukuumada DDSI iyo XDSHSI ugu jiraan buuxinta adeega helitaanka biyaha nadiifta ah, isaga oo tilmaamay maayirku waxqabadka balaadhan iyo horumarka dhumucda wayn ee ka hirgalay caasimada deegaanka, gaar ahaan dhinaca waxka qabadka hawlaha biyo galinta ee magaalada jigjiga wuxuuna maayirku ka warbixiyay jihooyinka lagu sii xoojinayo kor u qaadida bilicda, iyo adeeg bixinta caasimada deegaanka
Kulankaasi oo ay wakaalada biyaha ee maamulka magaalada jigjiga ku soo bandhigaytay warbixinta waxqabadka wakaalada ee dhinaca biyo galinta magaalada jigjiga. waxaa dhankooda ka hadlay kulankaasi qaybaha kala duwan ee bulshada, maamulka magaalada jigjiga oo ka warbixiyay isbadalka horumarineed ee ka hirgalay xarunta deegaanka.